Jehovah Adasefo Roboa Enyifurafo Wɔ Afrika
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Catalan Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Dangme Danish Dutch English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Indonesian Italian Japanese Kabyle Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Krio Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Mfantse Mingrelian Mixe (North Central) Myanmar Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tahitian Tankarana Tarascan Telugu Thai Tigrinya Tongan Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Valencian Wallisian Welsh Xhosa Zulu
Yɛroboa Enyifurafo Wɔ Afrika
Wɔ aman ahorow bi a worinya nkɔenyim do no, enyifurafo nntaa nnyi ho kwan kor noara a enyifurafo binom wɔ wɔ mbea afofor no. Ɔtɔfabi a woyi hɔn tokyen, na wonnya mboa a ɔbɛma woeetum edzi asetsena mu ndzɛmba nketsenketse bi a, osian hɔn tsebea no ntsi ne yɛ yɛ hɔn dzen no ho dwuma. Dɛ nhwɛdo no, wotum hyia nsɛndzendzen, ne tsitsir no wɔ edziban a wɔbɔkɔ akɔtɔ wɔ guamu, kaar a wɔbɔfow, nye sika a wɔdze bedzi dwuma mu. Ɔyɛ a, akenkan so tum yɛ hɔn dzen. Nnyɛ hɔn nyina na wotum kenkan Braille. Na sɛ wotum kenkan mpo a, ɔnnda famu dɛ wobenya nwoma ahorow wɔ hɔn kasaa mu akenkan.
Bɔbor mfe 100 nye yi na Jehovah Adasefo etsintsim Bible ho nwoma ahorow ama enyifurafo. Ndaansa yi ara Adasefo no dze mfir a wɔdze yɛ Braille no fii Netherlands kɔr Malawi, mbrɛ ɔbɛyɛ a wɔbɛyɛ Braille nwoma ahorow wɔ Chichewa kasa a wɔkã no wɔ Malawi no mu.
Leo, a ɔwɔ nyimdzee wɔ mbrɛ wɔyɛ nwoma ahorow wɔ Braille mu no, tuu kwan fiir Malawi kɔr Jehovah Adasefo edwumayɛbea nkorbata wɔ Brazil. Ɔkɛkyerɛɛ nyimpa beenum bi mbrɛ wɔdze efir nye kɔmpiwta do dwumadzi bi a Adasefo no ayɛ bɛdan nsɛm a wɔakyerɛw akɔ Braille mu. Dwumadzi no sesã nsɛm no kɔ Chichewa Braille kasa mu. Mbrɛ ɔbɛyɛ a iyi botum ayɛ yie no, hɔn a wodzi ho dwuma no bɔ Chichewa kasa no ho akyerɛwmba ahorow no nye ne Braille dze gu kɔmpiwta no do. Afei dwumadzi no botum asesã akyerɛwmba no akɔ Braille kasa mu na wɔaayɛ nwoma no wɔ kwan bi do a, ɔbɛyɛ mberɛw ama enyifurafo dɛ wobotum akenkan. Susu nsɛm a binom a wɔwɔ Malawi akã afa Braille nwoma ahorow a hɔn nsa akã no ho hwɛ.
Munyaradzi yɛ onyifuranyi ɔbaa bi a ɔwɔ ne mfe 30 mu. Ɔdze ne mber no mu fã yɛ nankasa no dwumadzi bi wɔ redio do. Wɔ bosoom biara mu no, ɔsan so dze ndɔnhwer 70 kyerɛkyerɛ afofor Bible mu nsɛm. Ɔkãa dɛ: “Wɔ mber bi a etwa mu no, minyaa Braille nwoma ahorow no wɔ Borɔfo kasa mu, naaso me nsa kãa bi wɔ mankasa mo kurow mu kasa mu no, ɔkãa m’akoma ankasa. M’enyi sɔ mbɔdzen biara a mo nuanom Adasefo no robɔ dze hɔn ahodze roboa ma yeenya nwoma ahorow wɔ Chichewa Braille kasa mu no yie. Iyi ma metse nkã dɛ hɔn werɛ mmfiir hɛn, na hɛn ho hia hɔn.”
Francis yɛ Ɔdasefo bi a ɔwɔ Malawi etsifi afamu. Osiandɛ n’enyi efura ntsi, nna ɔtaa ma afofor kenkan adze kyerɛ no. Ber a odzi kan a ne nsa kãa nwoma ahorow wɔ Chichewa Braille kasa mu no, ɔdze ahobow kãa dɛ: “Moroso daa anaa? Asɛm yi yɛ nwanwa!”
Loyce so a n’enyi efura no, som dɛ ber nyina somfo. Oetum aboa nyimpa 52 ma hɔn asetsena ayɛ papa. Ɔkwan bɛn do? Sɛ ɔrekyerɛkyerɛ afofor a, aber a ɔno kitsa Bible ho nwoma ahorow wɔ Braille kasa mu no, nna n’esuafo no so kitsa dɛm nwoma ahorow no ne dza woetsintsim. Dɛm nwoma ebien yi nyina Jehovah Adasefo na wotsintsimii.
Loyce a ɔreyɛ Bible adzesua
Leo a ofi Brazil a yeedzi kan akã no ho asɛm no kãa dɛ: “Sɛ mema nkorɔfo Bible ho nwoma wɔ Braille kasa mu, na muhu mbrɛ wɔyɛ hɔn adze sɛ wohu dɛ ɔyɛ hɔn kurow mu kasa mu dze a, iyi ma minya akomatɔyamu kɛse. Hɔn mu piinara akyerɛ mbrɛ hɔn enyi asɔ dza Jehovah ayɛ ama hɔn no, nye mbrɛ hɔn enyi agye dɛ ɔnam yi do no hɔnankasa tum siesie hɔnho ma Christianfo nhyiamu na nkyerɛkyerɛ edwuma no. Onnhia dɛ wɔma obi kenkan ma hɔn bio. Seiseiara dze, sɛ wɔkã dɛ hɔn nkotsee rusũa adze a, nna ɔyɛ hɔn nkotsee so ampa. Na wotum boa hɔn mbusua ma wotu mpon wɔ wɔnye Nyankopɔn ntamu ebusuabɔ mu. Dɛm nwoma ahorow yi boa hɔn ma wɔbɛn Jehovah.”
Video Tsiabaa: “Sɛ Mennya A, Nkyɛ Mayew”
Bible A Ne Tsentsen Bɛyɛ Mita Ebien
Wiadze Nyina Nwoma Tsintsim Edwuma No—Ɔboa Nkorɔfo Ma Wosũa Nyankopɔn Ho Adze